Dibana noMququzeleli wethu weVolontiya-iBhanki yokutya yaseGalveston County
Dibana noMnxibelelanisi wethu wamaVolontiya
Igama lam ndinguNadya Dennis kwaye ndinguMnxibelelanisi weVolontiya kwiBhanki yokutya yaseGalveston County!
Ndazalelwa eFort Hood eTexas kwaye ndakhulela njengejoni lomkhosi elikhule lihamba nosapho lwam ukuya kumazwe namazwe amaninzi. Saye sahlala eFriendswood, TX ngo-2000 ndaze ndaphumelela eFriendwood High ngo-2006. Ndiyakuthanda ukutyelela ulwandle nosapho lwam oluhle. Ngoku sineenkuku ezili-12, umvundla kunye nezinja ezi-2 endithanda ukudlala nazo!
NjengoMququzeleli wamaVolontiya ndiqinisekisa ukuba yonke imisebenzi efuna inkxaso yoluntu iyafezekiswa. Ndijonge phambili ekwandiseni ukufikelela kwamavolontiya kangangoko ndinako! Ndingancedisa nabo nabaphi na abantu okanye amaqela afuna ukuthatha inxaxheba kwimisebenzi yethu apha kwi-GCFB kunye nabantu abafuna ukugqiba iiyure zeNkonzo yoLuntu. Ndijonge phambili ekukhonzeni uluntu lwethu ngeyona ndlela ndinokuthi ndikwazi ngayo.
egqithileyo ngeposi Previous: Dibana neNavy Resource Navigator
Okulandelayo elilandelayo: IBhanki yoKutya yaseGalveston County ifumana i-50,000 yeedola kwiMorgan Stanley Foundation yokwandisa ukhetho lokutya kwiiNtsapho